farsamada GRIMME - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Calaamadda Qalabka GRIMME
Calaamadda: Qalabka GRIMME
Shan helaya hoppers RH 24-60 Combi ee beerta "Jacques"
Xilligan, shirkadda caanka ah ee baradhada sii kordhaysa ee KFH "Jacques" ayaa si fiican ugu diyaargaroobay goosashada, iyada oo kordhisay xadiiqadda qalabka shan xarumood oo soo-dhaweyn oo cusub hal mar ...
Tobanka sano ee ugu horreeya bisha Ogosto waa xilliga beeralayda baradhada ee bartamaha Ruushka ay bilaabaan inay isu diyaariyaan goosashada baradhada. Waa maalmo lagu soo koobayo koow ...
Franz Grimme, milkiilaha kooxda GRIMME ee shirkadaha, wuxuu u dabaaldegaa sannad-guurada
Franz Grimme, muwaadin sharafeedka magaalada Damme ahna milkiilaha kooxda GRIMME ee shirkadaha, wuxuu u dabaaldegayaa 3 sano 75da Maarso ee sanadkan. Wuxuu bilaabay ...
EVO 280 goosashada laba-safka laba-geesoodka ah ayaa markii ugu horreysay la soo saaray 2018. Iyada oo saddex aaladood oo kala-soocid waaweyn ah iyo qalab hoos-u-dhigis loogu talagalay ...
Xilliga 2021-ka, VENTOR 4150 afar-saf oo goos goos ah oo baradho iswada ayaa lagu qalabeeyaa qalab dheeri ah oo ku wajahan dhaqanka. Xaaladaha shaqada la ...
Bishii Febraayo 2, 2021, majaladda Nidaamka Baradhadu waxay qabataa webinar ku saabsan diyaarinta baradhada abuurka si loo beero, iyadoo la tixgelinayo astaamaha noocyada. Macluumaad ...
Warshadda GRIMME waxay bixisaa 10% qiimo dhimis ah dhammaan qadka qalabka bakhaarka; taxane xaddidan oo dhirta baradhada ah ee GL 430; taxane xaddidan oo qaabeeya sariirta GF 400.
Helitaanka hopper GRIMME oo leh qalab helitaan la habeeyay iyo kordhinta awoodda
In kabadan 20 sano, GRIMME waxay soosaaraysay waxqabad sare iyo qalab badbaadin alaab ah oo loogu talagalay keydinta baradhada, karootada, basasha iyo kuwa kale ...
Shirkad ASA-LIFT ugu dambeyntii waxay noqotay qayb ka mid ah Kooxda Shirkadaha ee GRIMME
Shirkadda tikniyoolajiyadda qudaarta ee deenishka ASA-LIFT ugu dambayntii wuxuu ku biiray Kooxda GRIMME. Xusuusin ahaan, sanadkii 2013 GRIMME Kooxda Shirkadaha ayaa iibsaday ...